]Onye nrụpụta nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe & Nkwakọ ngwaahịa nri Onye nrụpụta / onye na-eweta ngwaahịa | Ngwugwu DQ
Ngwugwu DQ - Onye nrụpụta nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe ma na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ mbipụta ihe karịrị afọ 31. Tel: + 86-18125839585 E-mail:dqpack@danqing.net
Obere akpa kwụ ọtọ
Kwụsị obere akpa Spout
Obere akpa ego kwụ ọtọ
Kwuo obere akpa akwa maka ihe ọṅụṅụ
Akpa Kraft kwụ ọtọ
Akpa Akara Quad
Akpa Akara Akara Atọ
Akpa akpụrụ akpụ
Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa ebipụtara
Ihe nkiri High Barrier n'ụdị mpịakọta
Ihe nkiri Pvc Shrink Sleeve Film
Ihe nkiri Pet Twist Maka Swiiti
Mpịakọta ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa ebipụtara
Ihe nkiri ọkwa nri
Pp, pvc, anụ ụlọ, ihe nkiri Cupsealing peelable
Die Cut Handle Akpa
Nkwakọ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ
Akpa akpakọ kọfị/tii
Akpa Nkwakọ ngwaahịa nri anụ ụlọ
Obere akpa akwa akwa Sanitary
Akpa akpa ntụ ntụ nke nchacha
Akpa ngwugwu nri
Akpa nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma
Akpa mkpụrụ osisi ọhụrụ
Akpa ihe ọṅụṅụ
Akpa akpa maka swiiti biscuit ice cream
Akpa ngwugwu Popcorn
Nkwakọ ngwaahịa kọfị & tii
Nkwakọ ngwaahịa nri anụ ụlọ
Nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma & nkeonwe
Nkwakọ ngwaahịa mkpụrụ
Nkwakọ nri nri nri
Nkwakọ ngwaahịa swiiti
Dị ka onye nduonye na-emepụta nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, onye na-emepụta akpa akpa nri, na ndị na-ebubata obere akpa, DQ Pack na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ kemgbe 1991.
A na-eme usoro mmepụta anyị niile dịka ihe achọrọ nke ISO9001-2018.Na ụghalaahịa anyị "DQ PACK CN" abụrụla aha aha ama ama na-edobe ọkwa na-eduga n'ahịa ụlọ nke nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na ubi obibi akwụkwọ.
A na-eji akpa nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe maka kọfị& nkwakọ tii, nkwakọ nri, nkwakọ ihe ọṅụṅụ ihe ọṅụṅụ, nkwakọ nri anụ ụlọ, wdg.
]Akpa akpa ntụ ntụ nke nchacha
]Akpa zipa nri anụ ụlọ
]Obere akpa ego kwụ ọtọ
]Akpa zipa nri
]Akpa swiiti pụrụ iche
Nhazi anyị - Ọkachamara& Oru oma
Anyị enyela OEM&ODM na-arụpụta akpa nkwakọ nri nri na ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe maka afọ 25. N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, ọtụtụ ihe ọmụma na ahụmahụ anyị na-emesi gị obi ike na ị ga-arụpụta ihe na-eju afọ. Anyị na-etinye mgbalị kachasị ike iji nye ezigbo mma, ọrụ afọ ojuju, ọnụahịa asọmpi, nnyefe oge nye ndị ahịa anyị bara uru. Anyị nwere ike ime ka ihe akaebe siri ike na agba na ngwaahịa mbipụta ikpeazụ dakọtara karịa 98%. Ọ bụrụ na ị na-achọ omenala Ndị na-emepụta akpa akpa nri, ndị na-emepụta akpa akpa ma ọ bụ onye nrụpụta nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, nabata ịkpọtụrụ DQ PACK.
Mmepụta ma ọ bụ ịzụ ahịa nke ọma ma ọ bụ ọrụ maka ọrịre
Mmepụta nnwale& Nkwenye nlele
Anyị bu n'obi ịghọta mkpa gị nke ọma iji belata ihe egwu ọrụ
nà Ọrụ na Nkwado
Ị na-eme atụmatụ
nkwakọ ngwaahịa gị
DQ PACK nakweere nkà ihe ọmụma ya "na-enye ndị ọrụ uru, na-ebute ọrụ maka ọha mmadụ", na-achọ ịgbalịsi ike ịghọ ndị kasị mma.
onye mmekọ sitere na ahịa mpaghara maka ndị ahịa ụwa na ndị na-ebubata ya.
Na-ekpuchi mkpokọta ala eji arụ ọrụ nke mita 35,000 wee bịa na ngwugwu akpaka 6 na ahịrị obibi, ahịrị lamination 4 dị elu dị elu na-enweghị ihe mgbaze.
DQ PACK ka BV, FDA, SGS na GMC kwadoro, yana ISO9001-2018 njikwa njikwa mma.
Anyị na-enye otu nkwụsị ọrụ na-ejikọta imewe, nha, mmepụta, nnyefe, ntinye, na ọrụ mgbe-ahịa.
Flow nke Mmepụta
Iwu ọkọlọtọ maka usoro mmepụta siri ike, iwu nde 18 sitere na mba ọzọ.
DQ PACK malitere ntinye aka ya iji nye nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na mbipụta na 1991. Dabere na Guangdong Province, ụlọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200 na 30,000 square mita nke ụlọ ọrụ na Dongshanhu Industrial Park.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na-ekpuchi ọnụ ala ala nke 35,000 square mita wee bịa na ngwugwu 6 akpaka na ahịrị obibi, 4 elu-ọsọ ihe mgbaze na-enweghị lamination. Anyị dum mmepụta usoro a rụrụ dị ka chọrọ nkeISO 9001-2018, na ụghalaahịa anyị "DQ PACK CN" aghọwo aha a ma ama na-ejigide ọkwá dị elu n'ime ahịa ụlọ nke nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na ubi obibi akwụkwọ. Dị ka ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na-ebupụ onwe ya na ahịa obibi akwụkwọ, DQ PACK ewepụtala alaka na Malaysia na Hong Kong n'otu n'otu.ihe
Ihe ngwọta omenala OEM, hazie nkwakọ ngwaahịa nke gị.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ 200+, ọkachamara R&D otu.
Mpaghara osisi ahụ bụ 30000+ square mita.
Ndị nrụpụta 100+ na ndị otu ọkachamara ọkachamara.
A na-eme usoro mmepụta anyị dum dịka ihe achọrọ nke ISO9001-2018, na ụghalaahịa anyị "DQ PACK CN" aghọwo aha a ma ama nke na-edobe isi n'ọkwá n'ime ahịa ụlọ nke nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na ubi obibi akwụkwọ.
]Foto otu ndị ahịa
]Ndị ọrụ ụbọchị ọmụmụ
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị otu ọrụ ndị ahịa. Nye ahụmịhe pụrụ iche maka onye ọ bụla metụtara akara. Anyị enwetara gị ọnụahịa na ngwaahịa kacha mma.
Ka emechara nyocha mpaghara nke ndị otu asambodo ụwa na-arụ na saịtị, DQ PACK ejirila BV, FDA, SGS na GMC nweta asambodo yana ISO9001-2018 njikwa njikwa mma.
Ndi ana-akpo: Ms Anna
Adreesị: Dongshanhu Industrial Park, Chaoan District, Chaozhou City, Guangdong, China
]Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị.
Anyị nwere obi ike ịsị na ọrụ nhazi anyị karịrị akarị.